Naịjirịa, otú ọ dị mbụ na otú ọ dị ugbu a
Ụlọ Nzukọ Alaeze bụ ebe anyị na-anọ efe Jehova. Ihe bụ́ isi e ji Baịbụl akụziri anyị ebe ahụ bụ Alaeze Chineke. Ọ bụ alaeze ahụ ka Jizọs ji mere isiokwu ozi ọma ya mgbe ọ nọ n’ụwa.​—⁠Luk 8:⁠1.
A na-anọ ebe ahụ ahazi ozi ọma anyị na-ezi. Ụlọ Nzukọ Alaeze bụ ebe Ndịàmà Jehova na-anọ ahazi ozi ọma ha na-ezi n’obodo ha. (Matiu 24:14) Ha niile anaghị aha otu, e nwekwara otú dị iche iche e si arụ ha. Ma, o nweghị nke n’ime ha na-ebu oké ibu. Ihe karịrị otu ọgbakọ na-amụkwa ihe n’ọtụtụ n’ime ha. Anyị arụọla ọtụtụ puku Ụlọ Nzukọ Alaeze na nso nso a n’ihi otú e si na-enwe ọtụtụ ọgbakọ ọhụrụ. A na-arụ ihe dị ka ise n’otu ụbọchị. Olee otú anyị si enweta ego anyị ji arụ ha?​—⁠Matiu 19:⁠26.
E ji ego e nyere n’onyinye arụ ha. A na-ezigara alaka ụlọ ọrụ ego ọ bụla a hụrụ n’ime ya. Ha ga-ejizi ya nyere ọgbakọ ọ bụla chọrọ ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze aka ma ọ bụkwanụ nyere ndị nke chọrọ ịrụzi nke ha mebiri emebi aka.
Ọ bụ ndị ọrụ a na-anaghị akwụ ụgwọ na-arụ ha. N’ọtụtụ mba, e nwere ndị a na-akpọ Ìgwè Ndị Na-ewu Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ndị a nwere aka ọrụ dị iche iche. Ụfọdụ n’ime ha si n’ezinụlọ nwere ego, ụfọdụ esiri n’ezinụlọ ndị ogbenye. Ha na-aga ọtụtụ ebe ná mba ha, na-arụrụ ọgbakọ dị iche iche Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ha na-agadị n’ime ime obodo. Ná mba ndị ọzọ, e nwere ụmụnna ndị na-ahụ maka ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze na ịrụzi ndị nke mebiri emebi. A na-agwa ha ebe ha ga na-arụ ọrụ. N’agbanyeghị na ọtụtụ ụmụnna ndị nwere aka ọrụ na-ewepụta onwe ha nye aka n’ebe ọ bụla a na-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze, ọ bụ ụmụnna ndị a na-arụrụ ya na-aka ná ndị ọrụ. Otú ha si eji obi ha niile arụ ọrụ na-eme ka ha rụchaa ọrụ ahụ. Mmụọ Jehova na-enyekwara ha aka.​—⁠Abụ Ọma 127:1; Ndị Kọlọsi 3:⁠23.
Gịnị mere anyị ji akpọ ebe anyị na-anọ amụ ihe Ụlọ Nzukọ Alaeze?
Olee otú anyị si enweta ego anyị ji ewu Ụlọ Nzukọ Alaeze n’ụwa niile?
Lee vidio a ka ị hụ ihe a na-eme na ya.
Ì chetụla ihe anyị na-eme n’ọmụmụ ihe anyị? Ọ bụrụ na ị bịa ọmụmụ ihe anyị, otú a ga-esi akụziri gị Baịbụl ga-amasị gị.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Mere Ndịàmà Jehova Ji Arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze? Oleekwa Otú E Si Enweta Ego E Ji Arụ Ha?